Medicne + Cica Trouble Spot Cream 40ml
မျက်နှာပေါ်ရှိ သိသာသည့် Troubleနေရာများကို ထိထိရောက်ရောက် ကုသပေးမည့် Madecasoid and Tea tree
leaf's oilပါဝင်သာကြောင့် အသားအရေ ရောင်ရမ်းခြင်းအား အချန်တိုအတွင်း သက်သာစေပြီး Skin Turn Over ဖြစ်အာင်ကူညီပေးပါသည်။ အသားအရေအစိုဓာတ်ကို ဖြည့်တင်းပေးပြီး အဆီဓာတ်နှင့် ရေဓာတ်ကို မျှတအောင် ဖြည့်တင်းလုပ်ဆောင်ပေးသောကြောင့် troubleကိုလျော့ကျစေပါသည်။
Medicne + Cica Trouble Toner 150ml
Trouble Skin ကို ပြန်လည် ကြည်လင်တောက်ပစေပြီး အသားအရောင်ပြန်လည် ထိန်းညှိပေးပါသည်။ Salicylic Acid နှင့် SymClariol ပါဝင်သည့်အတွက် အရေပြားတွင် ကပ်ညှိနေသေဆဲလ်သေနှင့် အဆီအလွန်အကျွံထွက်ခြင်းကို ထိန်းချုပ်ပေးပြီး အသားအရေကို ချောမွေ့တောက်ပစေပါသည်။ အရေပြား PH Balanceကို ထိန်းညှိပေးပြီး အရေပြားလွှာအားကျမ်းမာအာင် ထိန်းသိမ်းပေးပါသည်။
Medicne + Cica Trouble Facial Foam 30ml
Trouble Skin အား ပြန်လည်ပြုပြင်ပေးပြီး BHA Ingredient salicylic acid ပါဝင်ကာ အသားအရေတွင်ကပ်ငြိနေသည့် ဆဲလ်သေများနှင့် အဆီများကို ဖယ်ရှားပေးပြီး မျက်နှာသစ်ပြီနောက်ပိုင်း နီရပြီး ရောင်ရဲထိခိုက်လွယ်သည့် အသားအရေကို အချိန်တိုအတွင်း လျင်မြန်စွာတည်ငြိမ်စေပါသည်။ မျက်နှာသစ်ပြီး နောက်ပိုင်း ခံစားလေ့ရှိသည့် အသားအရေတင်းခြင်း၊ ခြောက်ခြင်းများကို လျော့နည်းစေပါသည်။
Medicne + Cica Trouble Facial Foam 150ml
Natuer be Reactive Lotion 140ml
တောင်သလဲသီးနှင့် ပန်းဂေါ်ဖီ အဆီအနှစ် 10%ပါဝင်ပြီး အိုမင်းရင့်ရော်လာခြင်းနှင့် ခြောက်သွေ့သည့် အသားအရေများကို ပြန်လည်ကုသပေးပါသည်။ အမျိုးသမီးဟော်မုန်းကို ပြန်လည်ဖြည့်တင်းပေးပြီး အသားအရေနုပျိုမှုကို ပြန်လည်ပေးစွမ်းသည့် အပြင် အသားအရေကို အာဟာရဓာတ်ဖြည့်တင်းပေးကာ အသားအရေကို ညီညာချောမွေ့ လှပစေပါသည်။
Natuer Be Reactive Skin 160ml
တောင်သလဲသီးနှင့် ပန်းဂေါ်ဖီ အဆီအနှစ် 10%ပါဝင်ပြီး အိုမင်းရင့်ရော်လာခြင်းနှင့် ခြောက်သွေ့သည့် အသားအရေများကို ပြန်လည်ကုသပေးပါသည်။ ဆုံးရှုံးသွားသော ရေဓာတ်ကို အပြည့်အဝပြန်လည် ဖြည့်တင်းပေးနိုင်ပြီး အစိုဓာတ်ပြည့်ဝသော အသားအရေကို ပေးစွမ်းမည့် တိုနာဖြစ်ပါသည်။
Natuer Be Reactive Set 2
တောင်သလဲသီးမှရရှိသော အာဟာရနှင့် ပန်းဂေါ်ဖီ အဆီအနှစ် 10%ပါဝင်ပြီး အိုမင်းရင့်ရော်လာခြင်းနှင့် ခြောက်သွေ့သည့် အသားအရေများကို ပြန်လည်ကုသပေးပါသည်။ အမျိုးသမီးဟော်မုန်းများ ပြန်လည်ဖြည့်တင်းပေးသည့် အတွက် အသားအရေကို ပြန်လည် တင်းရင်းနုပျိုစေပြီး စိုပြေမှုကိုအပြည့်အဝပေးစွမ်းနိုင်ပါသည်။ ထို့အပြင် သဘာဝဆေးဖက်ဝင် အပင်များမှထုတ်ယူထားသော အာဟာရဓာတ်များက အသားအရေကို ညီညာချောမွေ့လှပစေပါသည်။
Daysys Pure Melting Cleansing Cream 180ml
ဒန့်သလွန်သီး အဆီအနှစ်ဖြင့် ပြုလုပ်ထားပြီး အသားအရေအတွင်းပိုင်းအထိ အညစ်အကြေးများကို သန့်စင်နိုင်သည့်အပြင် အဆီကင်းစင်စေသော မိတ်ကပ်ဖျက် ခရင်(မ်)ဖြစ်ပါသည်။ ထိခိုက်မှုမရှိ အသားအရေအားလုံး အသုံးပြုနိုင်သော Cleansing Creamဖြစ်ပါသည်။
Daysys Pure Melting Cleansing Foam 180ml
အသားအရေအားလုံးအတွက် အသုံးပြုနိုင်ရန်အတွက် ဒန့်သလွန်သီး အဆီအနှစ်ဖြင့် ဖော်ထုတ်ထားတာပြီး အမြှုပ်ထွက်အား ကောင်းမွန်သောကြောင့် ထိရောက်သော Cleansing Effectကို ပေးစွမ်းနိုင်ပါသည်။ အသေးစိတ်ဆုံးအမြှုပ်များက ချွေးပေါက်အတွင်းပိုင်းအထိ ပိတ်စို့နေသာ ဖုန့်မှုန့်နှင့် ဆဲလ်သေများကို အနူးညံ့ဆုံး ဖယ်ရှားပေးပြီး သန့်စင်ကြည်လင်သော အသားအရေကို ရရှိစေပါသည်။
Daysys Nutri System Essential Emulsion 180ml
သဘာဝမုယောစပါး အဆီအနှစ်၊ တစေး ပါဝင်သောကြောင့် အမဲစက်၊တင်းတိတ်၊အရေးအကြောင်း တို့ကို ကာကွယ်ပေးနိုင်ပြီး အသားအရေတင်းရင်းမှုကို ပြန်လည်ပေးစွမ်းမည့် အာဟာရပြည့်ဝသော နို့ရည်ဖြစ်ပါသည်။စေးကပ်မှု မရှိပဲ လိမ်းရအဆင်ပြေပြီး နုညံ့သော နို့ရည်ဖြစ်သည့်အပြင် အဆီပြန်မှာကို မစိုးရိမ်ရပဲ သဘာဝအတိုင်း စိုပြေနုညံ့စေပါသည်။
Daysys Nutri System Essential Toner 200ml
သဘာဝမုယောစပါး အဆီအနှစ်၊ တစေး စသည်တို့က နေရောင်ခြည်ဒဏ်ကြောင့်ရရှိသော အမဲစက်၊ တင်းတိတ်တို့ကို လျှင်မြန်စွာ လျော့ပါးလာစေသည့်အပြင် အသားအရေတင်းရင်းမှုနှင့်အရေးအကြောင်း များမဖြစ်ပေါ်အောင် ကာကွယ်ပေးနိုင်သည်။Gel Type ဖြစ်သောကြောင့် Toner အဆင့်မှာတင်သိသာသော တင်းရင်းမှုကို ခံစားရရှိစေပါသည်။
Daysys Nutri System Essential set2
သဘာဝမုယောစပါး အဆီအနှစ်က နေရောင်ခြည်ဒဏ်ကြောင့်ရရှိသော အမဲစက်၊ တင်းတိတ်တို့ကို လျှင်မြန်စွာ လျော့ပါးလာစေပါသည်။ အသားအရေတင်းရင်းမှုနှင့်အရေးအကြောင်း များမဖြစ်ပေါ်အောင် ကာကွယ်ပေးနိုင်သည့် တစေးပါဝင်သောကြောင့် အသက် (၂၅)နှစ်မှစတင် အသုံးပြုနိုင်ပါသည်။ အသားအရေအတွက် ပြည့်စုံလုံလောက်သည့် အာဟာရဓာတ်ကို ဖြည့်တင်းပေးနိုင်သောကြောင့် စိုပြေတင်းရင်းသည့် အသားအရေကို ရရှိစေပါသည်။
By Blossom Coach
Origins Dr.Andre Weil For Origins Mega-Mushroom Relife & Resilience Smoothing Cream 50ml
Dr.face BB Anti-Acne Day Cream
By Dr.Face Skin & Beauty
Dr.Face BB Anti Acne Day Cream (30 g)
 မျက်နာလေးကို ပြောင်ပြောင်ဝင်းဝင်းလေးနဲ့ အနာအဆာတွေ ဖုံးကွယ်ပေးနိုင်တယ်
လက်ဖက်စိမ်း ပါဝင်တာကြောင့် ဝက်ခြံရောင်ရမ်းခြင်းများကို ကျစေပြီး ဝက်ခြံထွက်နေသူများအတွက် အထူးသင့်လျော်ပါတယ်။
SPF 15 PA ++ ပါဝင်လို့ UVA & UV B ၂ခု စလုံးကို ကာကွယ်ပေးနိုင်ပါတယ်
 ပမာဏ အသင့်အတင့်ကို လက်ချောင်းထိပ်လေးတွေနဲ့ ပုတ်ပုတ်လိ်မ်းပါ။
၁၅ မိနစ်လောက်ကြာတဲ့ အချိန်မှာ သင့်မျက်နာက သဘာဝအတိုင်းထွက်လာတဲ့ အဆီလေးတွေနဲ့ ပေါင်းစပ်ပြီး ဝင်းမွတ်ကြည်လင်တဲ့ မျက်နာလေး ဖြစ်စေမှာပါ……
Dr.face Vip Mask(Box)
 Green tea, White , collagen ဆိုပြီး သုံးမျိုးလာပါတယ်..
 Green tea အစိမ်းရောင် အထုပ်လေးက… ဝက်ခြံထွက်လွယ်တဲ့အသားအရေအတွက်
 White မီးခိုးရောင်အထုပ်လေးက ….အသားရေဖြူဖွေးလိုသူများအတွက်
 Collagen ပန်းရောင်အထုပ်လေးက….အသားအရေကြည်လင်တင်းရင်းလိုသူများအတွက် အသုံးပြုနိုင်ပါတယ်
 Mask လေးတွေ ပုံမှန်အသုံးပြုပေးပါက…အသားအရေကြည်ကြည်လေးဖြစ်လာမယ်..ရေဓာတ်ဖြည့်ပေးနို်ငမယ်..ဘက်တီးရီးယားပိုးမွှားတွေကိုလည်း သေစေပါ့မယ်
 မျက်နှာသစ်ပြီး အထုပ်ထဲက mask အပိုင်းလေးကို ၁၅မိနစ်ထားပြီး ပြန်ခွာပေးရမှာပါ.. ပြန်ပြီးမျက်နှာသစ်ပေးစရာမလိုပါ
Dr.face Skin Treatment Toning Lotion 100ml
Treatment Toning Lotion (100 ml)
 Toner + Treatment ပေါင်းထားတဲ့ အရေပြားကုထုံးဆေးရည် ဖြစ်တယ်..တချို့ တိုနာနဲ့မတည့်ဘူး..တိုနာတွေသုံးနေပေမဲ့ ဘာမှမထူးခြားလာဘူး ဆိုသူတွေအတွက်..အရေပြားကုထုံးဆေးရည်လေးကို ညွှန်းပေးချင်ပါတယ်..
 ညစ်နွမ်းမွဲခြောက်နေတာပဲဖြစ်ဖြစ်.. အသားအရေခြောက်သွေကြမ်းတမ်းနေတာပဲဖြစ်ဖြစ်..ချွေးပေါက်ကျယ် အဆီပြန်နေတာပဲဖြစ်ဖြစ် Dr.Face treatment toning lotion ကို သုံးသင့်ပါတယ်..
 မျက်နှာသစ်ပြီး တခြား ဘာ skin care မှ မလိမ်းခင် အသုံးပြုရန်…………….
Dr.face Skin Moisturizer Water Gel 50g
Dr.Face Gel moisturizer (50g)
 Water gel type ဖြစ်လို့ အဆီလုံးဝမပြန်ဘူး..စီးကပ်ခြင်းလုံးဝမရှီ…..collagen ပါလို့ လိမ်းပြီးရင် ပြောင်ပြောင်တင်းတင်းလေး အေးအေးလေး ဖြစ်နေမယ်....အရွယ်တင်နုပျိုစေမယ်..
 မျက်နာသစ်ပြီးနောက် လိုအပ်သောပမာဏ ယူကာ မျက်နာအားလိမ်းပေးပါရန်……………….
Dr.face Spot Clear Gel 15ml
Dr.Face Spot Clear Gel (15ml)
 ဝက်ခြံ ၊ ဝက်ခြံ အမာရွတ် ၊ အမည်းစက် တွေအတွက် တို့တို့ဂျယ် လေးဖြစ်ပါတယ်…ဝက်ခြံထွက်ခါစ ..စပြီး နီလာတဲ့အချိန် ရောင်လာတဲ့အချိန် မှာ ဒါလေး တို့ထားလိုက်ရင်…ဝက်ခြံ ဘက်တီးရီးယားပိုးမွှားတွေ သေပြီး ဝက်ခြံမထွက်တော့ဘူး..
 ဝက်ခြံ ထွက်လွယ်တဲ့အသားအရေဆိုရင် နေ့ကော ညကော daily skin care အနေနဲ့ မျက်နှာတပြင်လုံး လိမ်းလို့ရပါတယ်
 ဝက်ခြံ အဖုလေးများအပေါ် တနေ့လျင် ၂ကြိမ် မှ ၄ကြိမ် အတွင်း တို့ ထားပေးနိုင်ပါတယ်……